non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းကိုစတင်ဖို့အတွက်ဘယ်လို | USAHello | USAHello
non-profit အဖွဲ့အစည်းများကလူကိုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြဿနာများကိုများမှာ. non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းကိုစတင်ပါနှင့်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းကူညီရန်ဘယ်လို Read.
သငျသညျအစဉျအမွဲ non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်လိုစတင်သလဲသိချင်ဖူး – သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကူညီရန်တစ်ဦးက program ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းက? ဒီနေရာတွင်, သင့်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖော်ထုတ်ရန်အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေလျက်, စိတ်ကူးပြန်လည်ရှင်သန်ရန်ယူနိုင်ပါသည်အဆင့်အချို့ရှိပါသည်. ဒါ့အပြင်ကိုခေါ် non-profit အဖွဲ့အစည်းများခ “Charities”.
ဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းတိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုသူတို့ကိုဖြေရှင်းပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်ပြီ. သင်တို့မူကား, non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းကိုစတင်ကူညီထွက်ရှိပါသည်သောအခြားဝန်ဆောင်မှုများထုတ်စစ်ဆေးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမတိုင်မီ. အချို့ကိစ္စများတွင်ကူညီနိုငျသော non-profit အဖွဲ့အစည်းကိုပြီးသားတည်ရှိ.
မည်သည့်ပြဿနာအချက်ဖြေရှင်းရန်စတင်ပြဿနာကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်. عندما تفكر في كيفية بدء منظمة غير ربحية ، ما هي القضايا أو الاحتياجات التي تراها في مجتمعك؟ هل ترى الطلاب ينقطعون عن المدرسة أو الفصول الدراسية؟ قد ترى أن هناك حاجة لمساعدة القادمين الجدد الكبار في العثور على وظائف. သငျသညျထိုပြဿနာရှာပြီးသင်ဘယ်လိုအကူအညီပေးနိုင်ထွက်ရှာတခါသငျသညျအဖြေစဉ်းစားစတငျနိုငျ.
သင်သည်သင်၏အကျိုးအမြတ်မယူစုစည်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့သင်ကဖော်ပြထားသင်၏နာမကိုယူသင့်ပါတယ်. သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို non-profit အဖွဲ့အစည်းကိုဖော်ပြထားတယ်သို့မဟုတ်ဝတ်ပြုသောနာမည်တစ်ခုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်. တချို့က non-profit အဖွဲ့အစည်းများတစ်ဦးတည်းသာစကားလုံးနားလည်အသုံးပြုနေသည်. အားဖြင့်အမည်အားသုံးစွဲဖို့မရသေချာပါစေ. သင်ကရုံးကိုဆက်သွယ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ပြည်နယ်၏အတွင်းရေးမှူးရုံး. တစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်, ဤရုံးများ၏တဦးတည်းရှိတယ်. သင်၏အမည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့, သင်ကအသေးစားကြေးပေးဆောင်ခြင်းနှင့်လို့ခေါ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတင်ပြရန်ရမယ် “Foundation မှပစ္စည်းများ”.
3. IRS ကိုထံမှအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်လျှောက်ထား
non-profit ငွေရှာဖို့မဟုတ်ဆိုလိုတယ်. ဖြစ် non-profit အဖွဲ့အစည်းများကသူတို့ဝင်ငွေအပေါ်အခွန်၏ Non-ငွေပေးချေရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. သင်ပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာမည်မဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြရမယ်. ပြည်တွင်းအခွန်ဝန်ဆောင်မှုမော်ဒယ်များပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့သင်တစ်ဦးအင်္ဂါရပ်နေစဉ်းစားလျှင်သင်တစ်ဦးအမှုရလိမ့်မယ် 501 (က c) (3).
4. type အရေးယူမှုအစီအစဉ်
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်မည်မဟုတ်ပေမယ့်သင်, လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်တစ်ခုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်! ဒါက non-profit အဖွဲ့အစည်းကိုရေတွက်ဖို့ဘယ်လိုအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. အရေးယူတဲ့အစီအစဉ်မရှိဘဲသင်လိုအပ်သောခြေလှမ်းများ၏အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောရူပါရုံကို, သင်ကပြုစုပျိုးထောင်ရန်လိုအပ်ငွေကိုရှိသည်, သင်မည်သို့သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်ရန်ပါလိမ့်မယ်.
5. သင့်ရဲ့ non-profit ၏ပေါင်းစည်းမှု
သငျသညျ non-profit အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆောင်းပါးရပြီးတာနဲ့သူတို့ကိုသင်ပေါင်းစည်းဖို့ရှေးခယျြနိုငျ. ဒါဟာသင့်ရဲ့အစီအစဉ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုယုံကြည်သင့်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပေးမည်. သိုက်နှင့်အခကြေးငွေတိုင်းပြည်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနား. အဆိုပါကုမ္ပဏီ non-အမြတ်အဖွဲ့အစည်းကမှတ်တမ်းတင်ထားသော, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုလုပ်မထားဘူး 501 (က c) (3) လွတ်လပ်သော.
အုပျခြုပျရေးကောင်စီအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်များလူမျိုး၏အုပ်စုတစုကိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒီအလုပ်အတွက်များသောအားဖြင့်သူတို့ကိုဆပ်ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်မဟုတ်. သူတို့ကအဖွဲ့အစည်းအပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုစီမံကိန်းများဖော်ထုတ်ရန်ကူညီ. သူတို့ကအစအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရန်ပုံငွေတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အခြားသူများအားပြောပြရန်ကူညီပေးနေကြပါသည်. ဘုတ်အဖွဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်, လူမျိုးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းအပေါ်လူမျိုး၏ရှေ့မှောက်တွင်အသစ်သောအတွေးအခေါ်များကိုဆောင်ကြဉ်း.
သင်သည်သင်၏ non-profit စတင်ရန်မည်မျှပိုက်ဆံလိုအပ်ပါတယ်? သငျသညျရုံးကိုငှားချင်ဆုံးဖြတ်သင်ကူညီပေးရန်အခြားလူကိုငှားရမ်းလိုလျှင်. သင်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများထည့်သွင်းဖို့အချိန်ယူပါ. အဆိုပါပေးဝေရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စဉ်းစားပါ. ဒီတစ်ခါလည်းသင်ချေးသို့မဟုတ်အပေးအယူလုပ်ညှိနှိုင်းသို့မဟုတ်ရပ်ရွာထဲကနေလှူဒါန်းခဲ့နိုင်တဲ့အရာရှိပါတယ်.
8. ထောက်ခံမှုအဘို့သင့်အသိုင်းအဝိုင်းမှ Access ကို
သင်တစ်ဦးပစ်မှတ်အသိုင်းအဝိုင်းသတ်မှတ်သည့်အခါ, သငျသညျကိုထောကျပံ့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. စိတ်ကူးထောကျပံ့ပေးပိုင်ခွင့်ကလူနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ. key ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်နှင့်သင့်အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုပြောပြ. ပြန်လည်နေရာချထားရေးကြီးမြတ်သောအရပ်နှင့်စာကြည့်တိုက်များနှင့် non-profit အဖွဲ့အစည်းများနှင့်စင်တာများချိတ်ဆက်ရန်. သင့်ရဲ့စိတ်ကူးကျောင်းမှာအပြီးဘတ်စကက်ဘောကစားလူငယ်များစေလျှင်ဥပမာ, သင်ကအသိုင်းအဝိုင်းစင်တာနှင့်အတူနှငျ့အခြို့သင်တန်းဆရာနှင့်အတူပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်.
non-profit NOLO ထံမှအရင်းအမြစ်များ
သင့်ရဲ့ non-profit ပေါင်းစည်းဖို့ကိုဘယ်လို